Tronsmart ONYX PRIME, falanqaynta iyo waxqabadka | Warka gadget
Tronsmart ONYX PRIME, falanqaynta iyo waxqabadka
Ma waxaad raadinaysaa taleefoonnada gacanta ee bilaa-waayirka ah? Sida aad arki karto, tani maaha hawl fudud, marka la eego tirada badan ee fursadaha hadda suuqa yaala. Sidaa darteed, si aan kaaga caawino hawsha ugu dambayntii helitaanka taleefannada gacanta ee Wireless-ka ah ee dhabta ah ee aad u baahan tahay, maanta waxaan keenay Actualidad Gadget mid cusub oo ka xiiso badan, Tronsmart ONYX PRIME.
Waxaan awoodnay inaan tijaabinno taleefoonnada gacanta ee loo yaqaan 'Tronsmart headphones' dhowr maalmood ka dib waxaan kuu sheegi doonnaa dhammaan wixii ku saabsan khibradeena isticmaalka, sifooyinka aan heli karno iyo qiimaha aad ku heli karto mid haddii la doorto.
2 Kani waa Tronsmart ONYX PRIME
3 Sifooyinka uu bixiyo Tronsmart ONYX PRIME
4 Faa’iidooyinka iyo qasaaraha
Sida aan had iyo jeer samayno, waxaan ku tusinaa wax walba taas oo aan ka heli karno gudaha sanduuqa ONYX PRIME by Tronsmart. Sida had iyo jeer, waxaan sidoo kale dhihi karnaa inaanan helin wax la yaab leh. Anaga ayaa leenahay auriculares, kiiska ku amraya, a buuggan isticmaala iyo UBS Nooca C cable in lagu dallaco bateriga kiiska.
Iibso Tronsmart ONYX PRIME on Amazon qiimaha ugu fiican
Inta soo hartay, waxaan sidoo kale ka heli dhowr xirmo oo dhejisyo dheeri ah hagaajinta dhegaha-dhegaha, si ay u yeeshaan saddex cabbir oo kala duwan, oo ay la socdaan midda ku dheggan. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale leenahay laba kale oo "caag ah", ee cabbirro kala duwan, kuwaas oo u adeega si loo gaaro taam ka wanaagsan ee sameecadda gudaha dhegta.
Kani waa Tronsmart ONYX PRIME
Tronsmart ONYX PRIME waxay leeyihiin qaabka "dhegta", laakiin waxay leeyihiin wax u gaar ah naqshadooda taas oo shirkado yar ay go'aansadeen in ay dhamaystiraan sameecadohooda. Sida noocyo kale oo badan, taleefoonnada gacanta ee Tronsmart soo bandhig suufka dhegaha ee muranka dhaliyay ee ku hara gudaha dhegta oo shaqadoodu tahay inay sameeyaan saamayn faakuum ah. Tan waxaan u helaynaa saddex cabbir oo kala duwan.
ONYX PRIME sidoo kale waxay leedahay mid kale giraanta caag dheeraad ah taasi waa dhanka ka soo horjeeda makarafoonka. U adeega bsi uu talefanku u sii hagaajiyo dhegtayada iyo in aanay dhaqaaqi karin, soo dhici karin. Wax yar oo dheeri ah oo iyaga ka dhigaya a ikhtiyaar aad u fiican haddii aad raadinayso sameecado kugu weheliya inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa jirka isboorti. Qalab aan hore ugu soo aragnay moodallo kale oo aan tijaabinno ka dib waxaan caddayn karnaa inay guteen hawshooda. Waxaan sidoo kale leenahay saddex cabbir oo kala duwan si uu taam u noqdo. Ma yihiin waxaad raadinaysay? Hel kaaga Tronsmart ONYX PRIME on Amazon oo la socota bilaash.
Sameecadu waxay leedahay a cabbirka is haystaWaxay ku yar yihiin gacanta iyo gaar ahaan marka aan xidhno iyaga. Qalabka dhismaha, gudaha caag dhalaalaya, iyo culeyska aadka u yar ee uu leeyahay ayaa ka dhigaya inaan si dhib leh u ogaanno inaan xirannahay iyaga. Wax aad muhiim ugu ah kuwa isticmaala saacado ama marka ay ciyaarayaan ciyaaraha.
Qaybta ka baxsan dhegta, oo ka sarreysa astaanta shirkadda, waa taabashada taabashada. Iyaga ayaynu kari karnaa xakamee looxanka muusikada, u bood wadoyinka hore ama gadaal, hakad ama dib u bilaw dib u ciyaarida. Isla goobtaas waxaan ka heleynaa a makarafoonka loo isticmaali doono in lagu xakameeyo joojinta dhawaaqa firfircoon. Oo xagga hoose, waxaan leenahay a nalka horseed taas oo noo sheegaysa haddii xidhiidhku firfircoon yahay, ama heerka batteriga ee madax-weyne kasta.
El kiis dallacaadda, Halka taleefoonnada dhegaha la gashado ay ku dallacaan, waxa kale oo ay ka samaysan yihiin caag madow, kiiskan oo leh matte. Taleefannada dhegaha-dhegaha ayaa si fiican ugu habboon mahadsanid OS biinanka magnetized. Waxayna bixiyaan ilaa saddex lacag oo buuxa oo dheeraad ah si madax banaanida ONYX PRIME waa awoodaa inay nala socoto. Waxaad hadda ka iibsan kartaa Amazon Tronsmart ONYX PRIME qiimaha ugu fiican
Sifooyinka uu bixiyo Tronsmart ONYX PRIME
La madax-bannaani Waa mid ka mid ah dhinacyada aan ka fiirsan karno tan ugu muhiimsan marka la go'aaminayo mid ama mid kale. Waxaan leenahay taran muusiggu wuxuu socday ilaa siddeed saacadood rar walba. Y wadar ahaan ilaa 40 saacadood haddii aanu hayno kiis dacwadeed.
La isku xirnaanta waa mid ka mid ah awoodooda maadaama ay ku qalabaysan yihiin tignoolajiyada Bluetooth 5.2. Xiriir degdeg ah oo aan fiicneyn mar walba. Mahadsanid Qualcomm 3040 chip, Waxaan helnaa tayada maqalka oo la hagaajiyay taas oo ka dhigaysa waayo-aragnimada dhegeysiga mid si muuqata u wanaagsan.
Waxaan sidoo kale leenahay tignoolajiyada True Wireless Stereo Plus oo la xoojiyay. Waxa ay awood u leedahay in ay xakamayso in isticmaalka labada taleefan ee dhegaha la isku dheeli tiran yahay. Waxayna keenaysaa horumar la taaban karo oo ku yimi xasilloonida xidhiidhka. Sidoo kale tirinta Burburinta qaylada firfircoon marka loo eego QCC3040 chip waxay bixisaa khibrad isticmaale oo aad loogu qanco.
La tayada maqalka Waxay bixiyaan wixii laga filayo.
Madax-bannaanida ilaa 40 saacadood iyada oo aan loo baahnayn furayaasha.
Naqshad ku fiican ciyaaraha
Cabbirka Kiis dallacaadda iyo taleefoonnada dhegaha-dhegaha oo ka sarreeya celceliska.
La caag hagaajin Waxay noqon kartaa mid aan raaxo lahayn, inkastoo ay muhiim tahay in cabbirku sax yahay.
Ku dhejiyay: December 26 ee 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: December 25 ee 2021
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tronsmart ONYX PRIME, falanqaynta iyo waxqabadka
Dreame H11 Qoyan oo qallalan, si qoto dheer dib u eegis ku saabsan faakuumkan/xaaqadda